असल पत्नी परे जीवन सुखमय, खराब परे दार्शनिक –सुकरात – Life Nepali
संसारकै चर्चित दार्शनिक सुकरातका धेरै चेलाहरु थिए । उनको दर्शन बुझ्न चेलाहरुको लर्को लाग्थ्यो । ती नै चेला मध्येका एकजनाको बिहे गर्ने तयारी भइरहेको थियो । तर ती चेला बिहे गर्ने की नगर्ने भनेर द्विविधा मानिरहेका थिए । उनले उचित निर्णय लिन सहिरहेका थिएनन् । यही बीचमा उनी उचित सल्लाहका लागि भन्दै गुरु सुकरात कहाँ पुगे । उनलाई एउटा कुरा थाहा थियो की सुकरातको वैवाहिक जीवन अत्यन्त कष्टप्रद थियो । त्यसैले, गुरुले विवाह नगर्ने नै सल्लाह दिन्छन् भन्ने चेलालाई लागेको थियो ।
तर, चेलाले प्रश्न राख्न नपाई गुरुले भने – विवाह गर्नुपर्छ बाबु । गुरुको सल्लाह सुनेपछि चेलाले पुनः प्रश्न गरे– तर, तपाईंको जीवन त विवाहकै कारण नर्कमय छ नि ? सुकरातले मुसुक्क मुक्कुराउँदै जवाफ दिए— जस्तो हुन्छ बिहे गर । अनि असल पत्नी परेमा तिम्रो जीवन सुखमय हुनेछ । केही गरी मेरीजस्ती कर्कश पत्नी परेमा तिमी पनि म जस्तै दार्शनिक बन्ने छौ ।
यो पनि पढ्नुहोस – सुकरात र छिमेकी
एकपटक सुकरातका एक परिचित छिमेकी उनीकहाँ आए । उनले निकै उत्साहसाथ भने– मैले हजुरका मित्रबारे एउटा अनौठो कुरा सुनेको छु । उनको कुरा सुन्नासाथ सुकरातले भने– तपाईंले सुनेको कुरा म अवश्यै सुन्नेछु । तर, त्यो सुन्नुअघि एउटा सानो परीक्षण गरौँ । सुकरातका छिमेकीले अचम्म मान्दै सोधे– कस्तो परीक्षण ? सुकरातले जवाफ दिए– कुनै त्यस्तो अनौठो परीक्षण होइन, सामान्य तीन तहको परीक्षण मात्र हो । छिमेकीले सोधे– के–के हुन् त ती तीन तह ? पहिलो, सत्यताको तह । तपाईंले जसको कुरा सुन्नुभएको छ, के उनको कुरा पूर्णतः सत्य छ ? छिमेकीले भने– छैन, मैले यो कुरा कतै सुनेको मात्र हुँ ।
सुकरातले भने– केही छैन, ठिकै छ । दोस्रो, सकारात्मकताको तह । तपाईंले जे सुन्नुभएको छ, के त्यो सकारात्मक छ ? छिमेकीले भने– अहँ, यो त यसको ठिक उल्टो पो छ । सुकरातले भने– तेस्रो, उपयोगिताको तह । अब तपाईं मलाई बताउनुहोस् कि यहाँ तपाईंले मलाई बताउन लागेको कुरा के मेरा लागि उपयोगी छ ? छिमेकीले जवाफ दिए– अहँ, त्यस्तो उपयोगी त छैन । छिमेकीको जवाफ सुनेपछि गम्भीर हुँदै सुकरातले भने– मेरा प्रिय मित्र, जे कुरा तपाईं मलाई सुनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो न सत्य हो, न सकारात्मक छ र न त उपयोगी नै छ । यस्तो अवस्थामा त्यो कुरा मलाई बताउनुको औचित्य के छ ? सुकरातका छिमेकीलाई आफ्नो गल्तीको महसुस भयो र उनी सुकरातसित माफी मागेर घरतिर लागे ।
Previous घर लुटेपछि चोरले लिपिस्टिकले लेखे, ‘भाउजु निकै राम्री हुनुहुन्छ
Next उमेरले छेकेन यी जोडीको मायालाई , श्रीमान भन्दा २० बर्ष कान्छी श्रीमती !